ခေါင်းတလားပြုလုပ်သူ တစ်ဦး ဥက္ကာခဲရောင်း၍ ရုတ်တရက် ချမ်းသာကြွယ်ဝသွား – Maythadin
ခေါင်းတလားပြုလုပ်သူ တစ်ဦး ဥက္ကာခဲရောင်း၍ ရုတ်တရက် ချမ်းသာကြွယ်ဝသွား
May Thadin | November 19, 2020 | International News | No Comments
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှခေါင်းတလားပြုလုပ်သူတစ်ဦးဥက္ကာခဲရောင်း၍ရုတ်တရက်ချမ်းသာကြွယ်ဝသွားနှစ်ပါင်း၎.၅ဘီလီယံသက်တမ်းရှိဥက္ကာခဲအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ၂.၅သန်း(ပေါင်၁.၄သန်း)ရရှိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ဆူမာတြားပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ကိုလန်မြို့မှနာရေးခေါင်းတလားပြုလုပ်သူတစ်ဦးသည်နှစ်သက်တမ်းပေါင်း၎.၅ဘီလီယံရှိဥက္ကာခဲ ( ????????? ) ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ၂.၅သန်း(ပေါင်၁.၄သန်း)ဖြင့်ရောင်းချနိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူအဖြစ်မှ
ငွေကြေးကိုရရှိခဲ့သည်ဟုသိရသည်။ဂျာရတ်ကောလင်းမှာဥက္ကာခဲကိုဝယ်ယူပြီးနောက်အမေရိကန်သို့သင်္ဘောဖြင့်ပို့ဆောင်ခဲ့သည်။အဆိုပါဥက္ကာခဲကိုအမေရိကန်နိုင်ငံအင်ဒီယာနာပိုးလစ်မှဥက္ကာပျံဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူဒေါက်တာဂျေးပီယာတက်ခ်ကဝယ်ယူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုတက္ကဆက်စ်ပြည်နယ်အခြေစိုက်လနှင့်ဂြိဟ်များဆိုင်ရာနည်းပညာသိပ္ပံ ( ???????? ????????? ????????? ) ၏အဆိုအရသိရသည်။ဂျိုရူအာထံမှဝယ်ယူခဲ့သည့်ဥက္ကာခဲမှာကာဘွန်ပါဝင်သည့်
???/2 အမျိုးအစား ????????? ဖြစ်ကာအလွန်ရှားပါးသည့်အရာဖြစ်သည်ဟုလည်းအဆိုပါအဖွဲ့အစည်းကသတ်မှတ်ခဲ့သည်။အဆိုပါဥက္ကာခဲကိုလည်း ?????? ဟုတရားဝင်အမည်ပေးခဲ့သလိုအလေးချိန်၂.၅ကီလိုဂရမ်ရှိသည်ဟုသတ်မှတ်ခဲ့သည်။အခြားဥက္ကာပျံအခဲအပိုင်းအစများကိုလည်းဂျိုရူအာ၏နေအိမ်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ဒေသများမှပင်ထပ်မံရှာတွေ့ခဲ့သည်။တစ်ခုမှာဂျိုရူအာ၏နေအိမ်နှင့်၃ကီလိုမီတာအကွာတွင်ရှိသည့်စပါးခင်းတစ်ခုအတွင်းမှတွေ့ရှိခဲ့ခြင်း
ဖြစ်သည်။အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရ၏အမျိုးသားလေကြောင်းနှင့်အာကာသအေဂျင်စီ ( ????? ) ၏အကြီးအကဲဖြစ်သူသောမတ်ဂျမာလူဒင်ကမူဥက္ကာခဲများအနေဖြင့်လူနေအိမ်ခြေများပေါ်သို့ကျလာခြင်းမှာရှားပါးလွန်းသည်ဟုမှတ်ချက်ချခဲ့သည်။“အာကာသအတွင်းမှာကနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစနစ်ကခွဲထွက်လာတဲ့စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအရေအတွက်ပမာဏကအရမ်းကိုများပြားလွန်းပါတယ်။ဥက္ကာခဲအများစုကတော့လူတွေနေထိုင်ရာဒေသနဲ့အတော်ဝေးဝေးကိုကျတာပါ။
အငျဒိုနီးရှားနိုငျငံမှခေါငျးတလားပွုလုပျသူတဈဦးဥက်ကာခဲရောငျး၍ရုတျတရကျခမျြးသာကွှယျဝသှားနှဈပါငျး၎.၅ဘီလီယံသကျတမျးရှိဥက်ကာခဲအတှကျအမရေိကနျဒျေါလာ၂.၅သနျး(ပေါငျ၁.၄သနျး)ရရှိအငျဒိုနီးရှားနိုငျငံ၊ဆူမာတွားပွညျနယျမွောကျပိုငျး၊ကိုလနျမွို့မှနာရေးခေါငျးတလားပွုလုပျသူတဈဦးသညျနှဈသကျတမျးပေါငျး၎.၅ဘီလီယံရှိဥက်ကာခဲ ( ????????? ) ကိုအမရေိကနျဒျေါလာ၂.၅သနျး(ပေါငျ၁.၄သနျး)ဖွငျ့ရောငျးခနြိုငျခဲ့ပွီးနောကျဆငျးရဲနှမျးပါးသူအဖွဈမှ
ငှကွေေးကိုရရှိခဲ့သညျဟုသိရသညျ။ဂြာရတျကောလငျးမှာဥက်ကာခဲကိုဝယျယူပွီးနောကျအမရေိကနျသို့သင်ျဘောဖွငျ့ပို့ဆောငျခဲ့သညျ။အဆိုပါဥက်ကာခဲကိုအမရေိကနျနိုငျငံအငျဒီယာနာပိုးလဈမှဥက်ကာပြံဆိုငျရာကြှမျးကငျြသူဒေါကျတာဂြေးပီယာတကျချကဝယျယူခဲ့ခွငျးဖွဈသညျဟုတက်ကဆကျဈပွညျနယျအခွစေိုကျလနှငျ့ဂွိဟျမြားဆိုငျရာနညျးပညာသိပ်ပံ ( ???????? ????????? ????????? ) ၏အဆိုအရသိရသညျ။ဂြိုရူအာထံမှဝယျယူခဲ့သညျ့ဥက်ကာခဲမှာကာဘှနျပါဝငျသညျ့
???/2 အမြိုးအစား ????????? ဖွဈကာအလှနျရှားပါးသညျ့အရာဖွဈသညျဟုလညျးအဆိုပါအဖှဲ့အစညျးကသတျမှတျခဲ့သညျ။အဆိုပါဥက်ကာခဲကိုလညျး ?????? ဟုတရားဝငျအမညျပေးခဲ့သလိုအလေးခြိနျ၂.၅ကီလိုဂရမျရှိသညျဟုသတျမှတျခဲ့သညျ။အခွားဥက်ကာပြံအခဲအပိုငျးအစမြားကိုလညျးဂြိုရူအာ၏နအေိမျအနီးပတျဝနျးကငျြဒသေမြားမှပငျထပျမံရှာတှခေဲ့သညျ။တဈခုမှာဂြိုရူအာ၏နအေိမျနှငျ့၃ကီလိုမီတာအကှာတှငျရှိသညျ့စပါးခငျးတဈခုအတှငျးမှတှရှေိ့ခဲ့ခွငျး
ဖွဈသညျ။အငျဒိုနီးရှားအစိုးရ၏အမြိုးသားလကွေောငျးနှငျ့အာကာသအဂေငျြစီ ( ????? ) ၏အကွီးအကဲဖွဈသူသောမတျဂမြာလူဒငျကမူဥက်ကာခဲမြားအနဖွေငျ့လူနအေိမျခွမြေားပျေါသို့ကလြာခွငျးမှာရှားပါးလှနျးသညျဟုမှတျခကျြခခြဲ့သညျ။“အာကာသအတှငျးမှာကနရေောငျခွညျစှမျးအငျသုံးစနဈကခှဲထှကျလာတဲ့စှနျ့ပဈပစ်စညျးအရအေတှကျပမာဏကအရမျးကိုမြားပွားလှနျးပါတယျ။ဥက်ကာခဲအမြားစုကတော့လူတှနေထေိုငျရာဒသေနဲ့အတျောဝေးဝေးကိုကတြာပါ။